Momba anay – BSY-Misin'ny plywood,Veneer Peeling Line,Veneer Dryer,Plywood Hot Press,Log Debarker,Veneer Clipper,Glue Spreader,Pre Press for plywood,Plywood trimming saw,Veneer Peeling Lathe
Planer 4 lafiny
» Company Information » Momba anay » Momba anay
Niorina tamin’ny 1956, Weihai Baishengyuan Industry Co., Ltd. (ny tany am-boalohany weihai woodworking orinasa) dia hita ao amin’ny tanàna amoron-tsiraka tsara tarehy Weihai, Shandong, Shina. Famoriam-bola fikarohana sy fampandrosoana, famokarana, ara-barotra matihanina fitaovana mekanika vondrona orinasa lehibe, ary manana ny fitantanana-tena fanafarana sy fanondranana zo. Taorian’ny am-polony taona maro ny fampandrosoana, ny orinasa dia nanizingizina foana ny hitondra ny lalan’ny tsy miankina fanavaozana, fampandrosoana ara-tsiansa. Izy izao no mitarika ny vokatra feno napetraka ny plywood tsipika famokarana fitaovana, fanampiny vokatra, manaraka ny tsena fangatahana fanavaozana constantly.The vokatra dia aondrana any amin’ny firenena 50 mahery sy ny faritra any Azia, Eoropa, Afrika sy Amerika.
Ny orinasa dia ny National High-teknolojia orinasa, nandalo GB/T19001-2016 rafitra fitantanana kalitao sy ny CE fanamarinana. Izy io dia manana foibem-pampandrosoana teknolojia orinasam-paritany, foibem-pikarohana momba ny teknolojian’ny milina fanaovana hazo, Faritanin’i Shandong “orinasa iray sy teknolojia iray” ivon-toeram-pikarohana, foibe famolavolana indostrian’ny tanàna, laboratoara biraon’ny Weihai Wood-Based sns. Manana patanty 23 nasionaly izy io, 25 fitaovana patanty modely, nanome toromarika 10 matihanina. Ny orinasa dia nahazo ny “Faritany Shandong ny Loka Fahatelo amin’ny Fandrosoana Siansa sy Teknolojia”, mametraka voalohany ny faritra mifantoka amin’ny vokatra fitaovana ara-teknika ao amin’ny faritanin’i Shandong amin’ny tetikasa fanavaozana tsy miankina. Loka voalohany amin’ny zava-bita miavaka amin’ny fanavaozana teknolojia, “ny loka voalohany amin’ny vokatra vaovao tsara indrindra” “ny loka faharoa amin’ny siansa sy ny teknolojia loka ny indostrian’ny milina sinoa” “ny loka voalohany amin’ny fanavaozana ny indostrian’ny vokatra ala any Shina sy ny loka hafa”. BSY marika veneer rotary peeling tsipika sy CNC spindleless rotary peeling lathe dia fantatra ho vokatra marika malaza ao amin’ny faritanin’i Shandong.
Ny orinasa dia filoha lefitry ny mpikambana ao amin’ny China Forestry Machinery Association mpikambana sy ny Administrative Unit ao amin’ny Shina fitaovana milina fikambanan’ny, ala indostrian’ny zava-baovao iraisam-pirenena tale tale vondrona, Shandong fitaovana avo lenta orinasa fikambanana mpikambana vondrona, Shina woodworking milina fitaovana indostria “top folo” orinasa ho an’ny fanavaozana mahaleo tena, ny andiany voalohany amin’ny orinasa madinika sy salantsalany “tompon-daka miafina” ao amin’ny faritanin’i Shandong.
Ny BSY dia manome milina isan-karazany izay ahitana orinasa plywood, log debarker, veneer single-spindle rotary lathe, veneer spindle-less rotary lathe, veneer dryer, plywood press, plywood edge Trimmer, plywood Sander sns.
Ny serivisy sy ny fiofanana dia omena amin’ny alàlan’ny mpiasa voaofana matihanina amin’ny mpivarotra BSY, na mivantana amin’ny teknisiana serivisy manokana.
Ny tanjonay dia ny hanome fitaovana sy serivisy avo indrindra ihany. Tongasoa eto amin’ny BSY Industry Group indray. Raha mila fampahalalana fanampiny tsy hita amin’ity tranokala ity ianao dia aza misalasala mifandray aminay.